Akụkọ - N’aha onyonyo ndị China, Hainan Huayan Biotechnology Co. LTD abanyela na Nasdaq na New York iji mee emume mgbanwe a.
N’aha ụlọ ọrụ ndị China, Hainan Huayan Biotechnology Co. LTD abanyela na Nasdaq na New York iji mee emume mgbanwe a.
Na Disemba 18, 2018, a kpọrọ HYB ka ọ sonye na "na-eme ka ọwụwa anyanwụ na-akpali akpali ma na-enwe ọganihu ọhụụ" iji mee ememme ncheta 40th nke mgbanwe na imeghe mmemme nkwalite isiokwu. A kwanyere Xia jie, onye isi oche nke ndị isi oche ugwu dị ka mkpịsị aka nke nne nna na Nasdaq, New York, na-anọchite anya nnukwu ụlọ ọrụ ahụike iji gosipụta aha ụlọ ọrụ China na ụwa.
Na 1978, Nnọkọ Mgbakọ nke atọ nke Kọmitii Etiti nke 11 CPC kara akara mbido njem njem nke China banyere mgbanwe na mmeghe. Site na ime obodo rue obodo mepere emepe, site na ndọtị ruo na ndọtị, site na nhazigharị akụ na ụba ka ọ na-eme ka mgbanwe ahụ gbasaa nke ukwuu… N'ime iri afọ anọ gara aga, ndị China ejirila aka ha abụọ dee otu akụkọ dị mma nke mmepe mba na mba. Ndozigharị na imeghe, mgbanwe nke abụọ nke China agbanwebeghị China kpamkpam, kamakwa emetụta ụwa!
N'ime afọ iri anọ gara aga, ụlọ ọrụ ndị China amalitela ị ga-adaba n'ụkpụrụ mba ụwa. Onu ogugu di iche iche nke ndi China achoputawo uwa nile site na mgbali nke aka ha, na HYB jiri nwayọ buru ibu ama ama ama na ulo oru mba.
Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd. bụ nchịkọta nke nyocha ngwaahịa na mmepe, mmepụta, ahịa maka ijikọ ụlọ ọrụ ọrụ ahụike ọgbara ọhụrụ nke oge a, bụ isi ụlọ ọrụ na haikou, Hainan. Ugbu a, ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 40 dị iche iche nchọpụta Kemịkalụ, guzosie enterprise ọkọlọtọ karịa 20, banyere 10 zuru ezu ngwaahịa usoro, afọ 13 merie "top iri na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọhụrụ nke Hainan n'ógbè unit", Hainan n'ógbè elu-tech oru ngo, " China ike management pụtara ìhè onyinye unit "na ndị ọzọ na ukpono, ụlọ ọrụ bụ na July 2017 site National Ministry of Finance na State Oceanic Administration dị ka" mba ukwuu starker nhọrọ - na graver pụta-na Marine ọhụrụ mmepe ngosipụta oru ngo ".
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Companylọ ọrụ Huayan emeela ngụkọta nke ọrụ 11, mpaghara na ime obodo R & D. Ruo ugbu a, ọ nwetala ọkwa nyocha nyocha 9 kwekọrọ na ya ma ọ bụ nsonaazụ ikpeazụ, yana ọnụego ntụgharị dị ka 82% na nkezi ntụgharị kwa afọ nke ọrụ 3. Companylọ ọrụ nke ihe mepụtara patenti mbaụwa “akụkụ dị elu na-efe efe sistemu collagen enzyme mutation doro anya, dị ka iwu kọlụm, pịịlị pichia okwu na ụzọ nyocha na usoro ịdị ọcha” (nọmba ikike ikike patent zL201210141391. X) otu, mee isi ụlọ ọrụ ahụ ngwaahịa ndị na-edozi isinglass na-adabere na teknụzụ mbụ nke patent, yana iji teknụzụ patent nke enzyme - anụ ahụ na-efe collagenase, mepụta ụfọdụ mkpụrụ ndụ nke protein nke collagen, yana otu ụlọ ọrụ ahụ na-eduga n'ọchịchị ahụ na mba ụwa.
Ebe ọ bụ na njedebe nke 2014 China site na ụlọ ọrụ ndị dị na teknụzụ dị elu dị na haikou mma Ann technology ụlọ ọrụ obodo ọhụrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 nde yuan iji wuo protein peptide mbụ nke isinglass ụlọ ọrụ mmepụta ihe, gụnyere nsonye 4 kwa afọ nke tọn 1000 nke azụ azụ. mbụ protein peptide mmepụta akara (ngụkọta mmepụta nke 4000 tọn / afọ), 6 ọgwụgwụ ngwaahịa mmepụta ogbako, na-akwado ahịa center, nnyocha na mmepe center (academician workstation), nsị ọgwụgwọ ojii, nchekwa oyi, mkpara ebe obibi, wdg. gụnyere azụ gluu akwa peptide ntụ ntụ mbụ, nri nri peptide na ọgwụ nlekọta ahụike, mma na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ na ngwaahịa ọgwụ.